travelamsterdam မော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ2၏2| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ခရီးသွားကိုမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံနှင့် Eco-friendly ရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်. ခြောက်နာရီကြာခရီးစဉ်ကိုနည်းနည်းနှေးကွေးပေမဲ့, သက်သာအဆိုပါရထားကကမ်းလှမ်းနှင့်ခရီးစဉ်၏ကျက်သရေထူးချွန်ဖြစ်ပါသည်. တလျှောက်လှပသောရှုခင်းနှင့်အတူ…